Matthijs De Ligt Oo Haddaba U Muuqday In Uu Qish Ka Sii Bixiyay Kooxda Uu Jecel Yahay In Uu Xagaagan Ku Biiri Doono. - Gool24.Net
Kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa ka mid ah ciyaartoyda xagaagan loogu doonista badan yahay suua kala iibsiga ciyaartoyda.
Matthijs de Ligt ayaa soo qaatay xili ciyaareed layaableh isaga oo kooxdiisa Ajax ku hogaamiyay labada koob ee maxaliga ah ee dalkiisa Holland oo uu horyaalku ku jiro wuxuuna sidoo kale door wayn ku lahaa in ay semi-finalkii Champions League soo gaadheen.
Kooxaha Yurub ugu waa wayn ayaa saf dheer ugu jira saxiixa Matthijs de Ligt laakiin ilaa hadda waxa uu ka fiirsanayaa go’aankii uu qaadan lahaa balse waxa uu maanta bixiyay wax u muuqday halka uu ka ciyaari doono xili ciyaareedka cusub.
Matthijs de Ligt ayaa maanta dalkiisa Holland waxaa lagu gudoonsiiyay abaal marintii xidiga sanadka ee horyaalka Holland ugu fiicnaa ee uu ku guulaystay intii ay ku xafladaynayeen dalka Spain oo ay maalmo ku soo qaateen.
Matthijs de Ligt ayaa markii uu gudoomay abaal marinta xidiga sanadka ee Holland ugu fiican waxaa la waydiiyay haddii uu jeclaan lahaa in uu Frenkie De Jong kula midoobo Barcelona wuxuuna bixiyay jawaab xiiso galisay jamaahiirta Barca.
Kabtanka Ajax ee Matthijs de Ligt oo ka jawaabaya su’aasha De Jong iyo in uu la midoobi doono ka hadlaysa ayuu ku yidhi: “De Jong waxa uu qalmaa talaabada uu Barcelona ugu tagayo. Miyaan jeclaan lahaa in aan isaga la sii wato in aan Barcelona kala ciyaaro?”.
Matthijs de Ligt oo su’aasha uu iswaydiiyay isaga jawaabaya ayaa yidhi: “Wax fiican ayay noqon lahayd in aan isaga koox isku mid ah kala ciyaaro, laakiin anigu wali ma ogi waxa dhici doona”.
Hadalka Matthijs de Ligt ayaa u muuqda mid cadaan ah oo uu muujinaya in uu jecel yahay in uu Frenkie De Jong kala ciyaaro Barcelona balse aanu wali doonayn in uu ka hor dhaco inta arintiisa dhinac loo ridayo.
Kooxaha Liverpool, Man City iyo PSG ayaa Barcelona kula tartamaya saxiixa Matthijs de Ligt laakiin wakiilka wada xaajoodka adag ee Mino Raiola ayaa la aaminsan yahay in uu sabab u yahay in Barca ayna wali dhamaysitri karin saxiixa De Ligt.